Sihlalutya isithethi se-CSR, yenye yeepremiyamu ze-AUKEY | Iindaba zeGajethi
Ngakumbi nangakumbi kuthi bakhethe ukuphelisa zonke iintambo emakhayeni ethu, ubuncinci ezo sinokubakho kuzo. Yile ndlela ngakumbi nangakumbi xa iidesika zomsebenzi zinandipha umgangatho kunye nokuzimela okunikwa sisandi okanye isithethi esincinci esifanelekileyo. Namhlanje siza kukunika umzekelo olungileyo, isithethi se-Aukey CSR.
Esi sithethi sibubunewunewu kuzo naziphi na iitafile ozibeka kuyo, nangona kunjalo ... ngaba isandi sesithethi sikwimigangatho yemathiriyeli yaso? Makhe sijonge ngakumbi kwisithethi se-CSR esisinikwa ngu-Aukey.
Ke, njengamaxesha onke kuphononongo lwethu ngalunye, siza kubona ngokunzulu ukuba zeziphi izinto abasinika zona, sijonga imeko nganye esinayo, kunye nolungiselelo. Ukuba ufuna ukuya ngqo kulo naliphi na icandelo elithile, ungaya kwisalathiso sethu ngaphandle kokulibaziseka kwaye uhambe ngokukhawuleza. Ngaphandle kokuqhubela phambili, masihambe nohlalutyo lwesithethi I-Aukey CSR 4.0, isithethi esinoyilo olubonakalayo ngokungathandabuzekiyo ubunewunewu kwindawo yethu yokusebenza okanye edesikeni.
1 Izixhobo ze-Aukey CSR 4.0 kunye noYilo
2 Umgangatho womsindo kunye nokuzimela kwesithethi
3 Uluvo lomhleli kunye nokunxibelelana
Izixhobo ze-Aukey CSR 4.0 kunye noYilo
Siqala ngoyilo, uxande oluziisentimitha ezingama-20 ubude, 6,5 iisentimitha ukuphakama nolunye u-6 cm ubunzulu. Ngaphandle kwamathandabuzo, inoyilo olunesingqi esinamacala asezantsi agobileyo. Into yokuqala eyothusayo sisiqalo sayo kunye nenxalenye ephezulu eyenziwe ngealuminiyam, Into edla ngokuhamba negama laseTshayina kwiimveliso zalo ezininzi. Oko kuyinika umnwe premium Asinakukhanyela, ngakumbi abo baneemveliso zesinyithi ezinje ngeApple bayakuvuyela le nkampani itafile.
Ngaphezulu sinepaneli yamaqhosha, nayo yenziwe ngentsimbi. Ngayo siya kuba nakho ukulawula umculo kunye neefowuni kwimo yethu ngendlela elula. Kwenye yeekona zenxalenye ephezulu sine-LED eya kuthi ibonise imeko yemveliso. Ngelixa kwindawo yangasemva siya kufumana unxibelelwano. Ngaphandle kwamathandabuzo kuyilo kufuneka sitsho ukuba yenziwe kakuhle kakhulu, ibonisa ubunzima obuzinzileyoAsazi ukuba kungenxa yokuba zibandakanyiwe izinto zokulwa okanye zizinto zabo. Ukongeza, ezantsi zinendawo ezine ezine-silicone ezinceda isithethi ukuba singahambi etafileni nokuba yimilimitha ngaphandle kokuveliswa kwakhona okunamandla.
Umgangatho womsindo kunye nokuzimela kwesithethi
Isithethi sisinika i-32 W iyonke ukuba sidibanisa abaqhubi bayo babekwe emacaleni. Aba babhaptizwe njenge IBassRadiator, inyani kukuba zibandakanya i-subwoofer encinci ezikhuselayo kakuhle kakhulu. Ukuqhubela phambili ukuphucula umba, banenkqubo yokudityaniswa ngokupheleleyo yedijithali, besebenzisa itekhnoloji ye-MaxBass ekucingelwa ukuba iphucula i-bass. Apha sinengxaki yokuqala, i-Aukey ijolise kakhulu ekuphuculeni i-bass ethi ivelele kuzo zonke ezinye izandi, mhlawumbi kakhulu.
Umthamo omkhulu ngowama-80 db, kwaye nangona singakhange sifumane ukungcola kwisandi okanye naluphi na uhlobo lokungaphumeleli njengoko sisonyusa ivolumu, inyani kukuba ndiyaziphinda, ii-bass ziyabonakala ngaphezu kwezinye izandi.
Ngokumalunga nokuzimela kunye nokunxibelelana, sifumana iBluetoot 4.0 kunye ne-A2DP, izixhobo zomsindo zesiko esivumela ukuba sinxibelelane ngokukhawuleza kwaye sibonelele ngeemitha ezili-10 zoluhlu. Inyani yile yokuba asifumananga nayiphi na ilahleko yomgangatho wokumamela ukuqaqambisa, umgangatho weBluetooth ungaphezulu ngokwaneleyo. Lilonke, ibhetri yayo ye-4.000 mAh iya kusinika phakathi kwe-8 kunye neeyure ezili-12 zebhetri zombini zidlala umculo kunye neefowuni, ukuzimela kuya kuxhomekeka ekubeni sisebenzisa iBluetooth okanye imveliso yeAUX, phaya phantse iiyure ezine. Sikwazile ukufumana iiyure ezi-7 zokusebenzisa ngokulula kwaye ngaphandle kwengxaki.
Uluvo lomhleli kunye nokunxibelelana
Njengoko besesitshilo, ngasemva sinonxibelelwano ezimbini, i-USB encinci esebenza kuphela ukutshaja isithethi (esinokusetyenziswa xa ubiza) kunye igalelo le-AUX oko kuyasivumela ukuba sonwabele umculo nangona ngamanye amaxesha siphulukana nolawulo lwesandi ngamaqhosha. Iqhosha ecaleni kwezi zinto zimbini zonxibelelwano likwasebenza ukuvula kunye nokuhlawula ngokupheleleyo isixhobo, iqhosha elimi kakuhle kodwa elenza umsebenzi walo ngaphandle kokuqhubeka.
Sinamava amahle nesithethi, inyani kukuba singade sithi kuyabiza ngandlela ithile, kodwa ngokwendlela yoyilo olo luhlu lwamaxabiso luyamangalisa ngokwenene. Ukuba le nto uyikhangelayo ikumgangatho ophakamileyo wesandi, ulibale ngokufikelela kumanqanaba aphezulu, kodwa ukuba uhlala ekudlaleni umculo rhoqo, amandla awo anele. Mhlawumbi uyilo, izixhobo kunye nebhetri zezona zinto zibonakala kakhulu kwisithethi. Ungamngenisa Akukho mveliso ifunyenweyo ukusuka kwi- € 39,99.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Sihlalutya isithethi se-CSR, yenye yeepremiyamu ze-AUKEY